XOG:- Hal arrin oo Xasan Cali Kheyre ku kaliftay Raali-gelin cad oo uu ka bixiyay weerarkii Guriga CC.Shakuur Warsame | Ceeldheer News: Somalia News Update
XOG:- Hal arrin oo Xasan Cali Kheyre ku kaliftay Raali-gelin cad oo uu ka bixiyay weerarkii Guriga CC.Shakuur Warsame
Ra’iisul Wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa xalay hoygiisa ku booqday siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo ah hogaamiyaha xisbiga Wadajir,islamarkaana haatan ah musharax madaxweyne.
Xasan Cali Kheyre oo shalay soo gaaray magaalada Muqdisho ayaa loo sameyya soo dhaweyn heer sare ah,isaga oo intaas kadibna la hadlay Warbaahinta cadeeyana mowqifkiisa ku addan doorashada dalka iyo musharaxnimadiisa oo markii ugu horeysay uu Warbaahinta ka hor sheegay.
Ilo ku dhow Ra’iisul Wasaare Kheyre ayaa sheegay in uu ka warheliyay kulanka Beri Midowga Musharaxiinta in uusan ka qeybgeli doonin kadib diidmo cad oo ka timid musharaxiinta qaarkooda gaar ahaan CC.Shakuur Warsame iyo Sheekh Shariif Sheekh Axmed.
Intaas kadib Xasan Cali Kheyre ayaa la sheegay in uu raadiyay xildhibaano iyo odayaal dhaqan kuwaas oo ka qeyb qaata isku soo dhaweynta musharaxiinta diidan,waxaana kulanka hore ay la qaateen Sheekh Shariif Sheekh Axmmed.
Ilo wareedyo ayaa ku waramay in Sheekh Shariif uu cadeeyay sida uusan ugu kalsooneyn ra’iisul Wasaarihii hore Xasan Cali Kheyre islamarkaana uu ka doonayo laba arrin oo kala ah in uu raali-gelin kabixiyo isa hor istaag lagu sameeyay isaga iyo Xasan Sheekh oo xilligaas ku wajahnaa magaalada Kismaayo iyo in uu cadeeyo mowqifkiisa Farmaajo oo shaki uu ka qabo Shariif una arko wakiil lagu soo dhex deystay Musharaxiinta.
Markii dambe waxaa la sheegay in uu raali-gelin siiyay Xasan Cali Kheyre madaxweynayaashii hore ee kala ah Xasan Sheekh Maxamuud iyo Sheekh Shariif islamarkaana ay qabaleen kuna qanceen.
Arrinta ugu weyn ee hortiilay Xasan Cali Kheyre ayaa aheyd weerarkii Cabdiraxmaan Cabdishakuur,islamarkaana sabab u aheyd in la soo jeediyo in uusan ka qeybgeli doonin shirweynaha musharaxiinta.
Xildhibaano uu ka mid yahay Senator Dhagdheer iyo Odaayaal ku heyb ah Xasan Cali Kheyre ayaa la sheegay in ay kulan waqti badan qaatay ay la yeesheen CC.Shakuur kaliyana uu sheegay in uu doonayo raali gelin cad oo uu bixiyo Xasan Cali Kheyre.
Labada masuul oo si weji ka weji ah isku hor fariistay ayaa ka sheekeystay marxaladdaas iyo sida ay ku timid waxaana Ra’iisul Wasaarihii hore Xasan Cali Kheyre uu ka raaligeliyay CC.Shakuur weerarkii 2017-kii oo sababay dhimasho iyo dhaawac soo gaaray ilalaada guriga Cabadiraxmaan Cabdishakuur.
Dhinaca kalana dhibane Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa sheegay in uu aqbalay raaligelinta laga siiyay weerarkaas kuna qancay isaga oo ugu baaqay dadkii kale ee ku lug lahaa in ay heystaan fursad tan la mid ah.
Howlgal ka socda Magaalada Gaalkacyo kadib weerar Xalay ka dhacay
Wasiir amni oo bixiyay Amar dhaliyay caro xooggan iyo wararkii ugu dambeeyay ee xaladda dalka….
Wasiir amni oo bixiyay Amar dhaliyay caro xooggan iyo wararkii ugu dambeeyay ee xaladda dalka....
Alshabaab oo weerar ku qaaday Saldhig ay ku sugnaayeen ciidamada dowladda iyo khasaaro ka dhashay
Akhriso:- Sedax Madaxweyne oo loo xil-saaray xallinta dagaalka culus ee ka socda dalka Itoobiya